Argagixiso - BBC Somali - Mawduuc
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 16 June, 2014, 14:45 GMT 17:45 SGA
Qaraxyo ka dhacay Turkiga
Ugu yaraan afartan qof ayaa ku dhintay laba qarax oo ka dhacay Reyhanli oo ku taala xuduuda Turki iyo Suuriya. 11 Mey 2013
QM oo sheegtay in ilaa 3000 askari ay AU uga dhimatay Soomaaliya
Soomaaliya waxaa lagu dilay ilaa 3,000 askari oo ka tirsan ciidamada nabad-ilaalinta midowga Africa tan iyo sanadkii 2007,sidaas waxaa sheegay ku xigeenka xog guud ee UN Jan Eliasson.
Saraakiil ku sugan Soomaaliya ayaa sheegay in ku xigeenka garyaqaanka guud ee dalka lagu dilay magaalada Muqdisho. Axmed Sheekh Nuur Maalin ayaa waxa toogtay saddex nin oo wejiyada soo qarsaday xilli uu ka soo baxay masaajid ku yaal bartamaha Muqdisho.
26 Abriil 2013
22 Abriil 2013
16 Abriil 2013
QM oo cambaareysay weerarradii Muqdisho Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa si kulul u cambaareeyay weerarradii ka dhacay magaalada Muqdisho axaddii oo ay sheegeen inay ku dhinteen 34.
Simmonds oo ka hadlay shirka LondonMaqal04:03
26 Maarso 2013
Xubin sare oo culimada Suuriya ee aad ka u taageersanaa Madaxweyne Bashar al-Asad ayaa lagu dilay qarax bam oo ka dhacay masaajid ku yaal Dimishiq. Masuuliyiinta Suuriya ayaa sheegay in qof bam isku soo xiray uu dilay Sheekh Maxamed al-Bouti.
Magaalada Xuddur ee gobolka Bakool ayaa lagu soo warramayaa in dadweynihii ka qaxeen ka dib markii al-Shabaab soo gashay. Ciidan Itoobiya iyo kuwo dowladda Soomaaliya oo muddo hal sano ah joogay ayaa la sheegay inay isaga baxeen magaalada.
17 Maarso 2013